चलचित्र 'कबड्डी कबड्डी कबड्डी' को शीर्ष गीत रिलिज (भिडियो ) – Namaste Filmy
असोज ३ गते देखि प्रर्दशनमा आउन लागेको चलचित्र ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ को शीर्ष गीत रिलिज गरिएको छ ।चलचित्रको शीर्ष गीत र्‍याप शैलीको गीतमा शब्द र स्वर कालीप्रसाद बास्कोटा र अनुपम शर्माको रहेको छ ।काली प्रसादको शब्द रहेको गीतमा सनी सुनामले संगीत रहेको छ ।
चलचित्रमा दयाहाङ राई, उपसना सिंह ठकुरीसँगै कर्मा शाक्य, विल्सन विक्रम राई, बुद्धि तामाङ, विजय बराल, पुस्कर गरुङ, कविता आले, लोनिभा तलाधर, कमल मनी नेपाल अरुणा कार्की पोखरेल, शिला खनाल मनी के. राई लगायत कलाकारको अभिनय रहेको छ ।
चलचित्रलाई रामबाबु गुरुङले निर्देशन गरेका छन् । ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’को कथा निर्देशक गुरुङ र उपेन्द्र सुब्बाले लेखेका हुन् ।शैलेन्द्र डि. कार्कीले छायांकन गरको फिल्मलाई सुरेन्द्र पौडेलले सम्पादन गरेका छन् ।